Sky Sports Oo Ogaaday Labada Weeraryahan Ee Manchester United Ay Ka Heli Karayso Suuqa Iyo Magacyadooda Oo Kaa Yaabin Doona | Laacib.net
January 25, 2020 Abdiwahab Ahmed Comments Off on Sky Sports Oo Ogaaday Labada Weeraryahan Ee Manchester United Ay Ka Heli Karayso Suuqa Iyo Magacyadooda Oo Kaa Yaabin Doona
Wax ka yar hal toddobaad ayaa ka hadhay xilliga uu xidhmayo suuqa iibka ciyaartoyga ee bisha January, waxaana aan wali ka faa’iidaysanin Manchester United oo ku fashilantay dhawr ciyaartoy oo ay isku dayday saxeexooda.
Hore waxay Manchester United ugu guul-darraysatay mishiinka goolasha ee Erlin Haalan oo ay ka hor qaadday Borussia Dortmund, usbuucanna waxa kasoo xidhmay bartilmaameedkoodii Bruno Fernandes oo xilliyada qaarkood la xusay inay heshiis hor dhac ah wada gaadheen.
United oo uu ka dhaawacan yahay weeraryahanka Marcus Rashford oo muddo bilo ah garoomada ka maqnaan doona, waxay u baahan tahay weeraryahan si degdeg ah u yimaadda Old Trafford oo gala kaalinta uu banneeyey xiddiga reer England, laakiin waxa kale oo wiiqantay khadka dhexe oo Paul Pogba iyo McTominay ay ka dhaawacmeen.
Red Devils oo xagaagii iska iibisay Romelu Lukaku, waxa kale oo ay Inter Milan siisay Alexis Sanchez oo saldhigi kari waayey Old Trafford, waxaanu ku jiraa xiddiga reer Chile ciyaaryahannada la hadal hayo in ay kooxdu soo ceshan doonto haddii fashilka suuqu kusii socdo.
Haddaba telefishanka Sky Sports ayaa shaaciyey laba weeraryahan oo ay Manchester United si fudud ku heli karto, kuwaas oo midkood uu hore ugu fashilmay horyaalka Premier League.
Telefishanku waxa uu sheegay in Manchester United ay heli karto Odion Ighalo oo u dhashay Nigeria ama Islam Slimani oo u dhashay Algeria amaahna kaga maqan kooxdiisa, kuwaas oo noqon kara xalka degdegga ah ee ay ku gaadhi karto suuqa weyn ee xagaaga.
Ighalo waxa uu hadda ka tirsan yahay kooxda reer China ee Shanghai Shenhua oo uu ku biiray markii uu ka tegay Watford, laakiin xiddiga reer Nigeria oo ku wanaagsan kubbadaha goolka hortiisa uu ka helo, waxa uu xiisaynayaa inuu dib ugu soo laabto horyaalka Premier League.
Slimani oo isaguna amaah kula jooga Monaco, waxay Manchester United ku qancin kartaa Leicester City inay soo burburiso heshiiska ay kooxda reer France ugu dirtay, taas oo dhici karta sida uu sheegay telefishanka Sky Sports.